About AOXJET Electrice sọfụbọdụ Company
AOXJET e na-eme ka electric propulsion systems kemgbe 2015. Early na anyị na-ọnọ electric propulsion usoro dị iche iche ụdị na-achọ ka ike ha mmiri egwuregwu ngwaahịa. Nke a nyere anyị ọtụtụ ahụmahụ na ubi tupu anyị kpebiri ime ka e lewe anyị mmiri egwuregwu ngwaahịa. Anyị na-enwe ike iri ihe niile anyị mụtara ma na-etinye ya n'ime anyị ngwaahịa na-anọchite anya ndị kasị mma uru maka ịrụ ọrụ.
Miri emi anyị gbanye mgbọrọgwụ netwọk ke mmiri egwuregwu ụlọ ọrụ na-enyere anyị aka mgbe niile nwere nnọọ mbụ aka ọmụma nke ọ bụla ọhụrụ ngwaahịa na ọhụrụ na ọnọdụ. Dị ka ndị na-eduga isi propulsion soplaya, anyị nwere imekọ ihe ọnụ mmekọrịta na ọtụtụ ndị ọzọ na mmiri egwuregwu ngwaahịa emepụta na mkpa nke ịzụ ha na ngwaahịa na kasị ala-ekwe omume na-eri. All ngwaahịa anyị depụtara na website, na-ma nganga emepụta site AOXJET ma ọ bụ mepụtara anyị putara ighe họrọ mmekọ, na-ekere òkè nkịtị isi ihe mgbaru ọsọ nke na-eke nke kacha mma mma na nzọ uru mmiri egwuregwu ngwaahịa.
All AOXJET ngwaahịa na-ma mere na ụlọ AOXJET, ma ọ bụ site na ya ekwenye mmekọ ndị na-eji AOXJET si propulsion usoro. Nke a na-enye anyị bụghị nanị ndị kasị mma price uru, ma na-kacha mma iji na-ebute ụzọ na flexibilities.
Pụrụ ịdabere Core Technology
Site anyị na afọ nke nnyocha na mmepe, na ule dị iche iche na ngwaahịa, anyị propulsion usoro nwere n'etiti ndị kasị pụrụ ịdabere na usoro ke ererimbot. Karịsịa anyị e ESC, ọma-eme ka ala na-ezighị ọnụego n'okpuru 0,5%, nke dị oké ala maka mmiri egwuregwu electric ngwaahịa.
Customizable Board nkebisi / Brand
Ekele anyị gara aga ahụmahụ nke na-ụlọ n'ichepụta nke mmiri egwuregwu ngwaahịa nakwa dị ka na-ekwenyere ndị dị iche iche na ndị ọzọ mmiri na ngwá ụlọ ọrụ, anyị mere ka anyị propulsion systems ka ukwuu ike na ike ike mfe ruo eruo jidesie dị iche iche osisi shapes. Na mmekọrịta anyị na ndị dechara ọkọnọ yinye site na ulo oru na-emepụta, na ebu Nsukka, ka osisi shei ụlọ mmepụta ihe, anyị na-dị nnọọ mkpa gị echiche ma ọ bụ gị nghọta na enyemaka na ị nwere gị nnọọ onwe e Electric sọfụbọdụ ma ọ bụ ozu osisi.
Inye nkwado ego Sample Price
Anyị bụ ndị ọrọ nrọ. Anyị chọrọ ime ka mmiri egwuregwu na-ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu. Anyị chọrọ ihe na ndị mmadụ na-enwe ohere na-enweta fun nke ọdịdị anyị nne na-enye mmiri. Anyị kweere otú ị bụ. Anyị kweere na ihe niile nnukwu nrọ nwere a umeala mmalite, ya mere, anyị na-achọ ime ka ihe mgbochi na-dị ka ala dị ka omume, maka niile ọrọ nrọ bụ ndị dị njikere itinye aka na nke a oké mmiri egwuregwu na-akwalite igba. Laa azu ka omenala ịnye ọnụahịa atụmatụ, anyị na-ukwuu subsiding anyị sample price ime ka sample na-abụ nnọọ ọnụ ala nke mere na ọ ga-abụ nnọọ mfe ka i nweta onye na-agbalị ya na gị onwe gị. The subsidized sample price bụ nditịm naanị maka enterprise buyers onye na-eme atụmatụ ka anyị na-ere ahịa / nkesa. Ya mere a nkenke ụlọ ọrụ ntụziaka nwere ike ịdị mkpa ka isiokwu anyị subsidized sample price. Personal azụ ahịa pụrụ ịzụta na Retailing price.
Ekwentị: +86 13058172496
Water Board With The Motor, sọfụbọdụ With Motor , Motorized Surfboard, Motor Surfboard, Jet Electric Body Board Motor, Motor For Esurfing,